Andro maneran-tany ho an’ ny onjam-peo : Raikitra ny miara manonja -
AccueilSongandinaAndro maneran-tany ho an’ ny onjam-peo : Raikitra ny miara manonja
Andro maneran-tany ho an’ ny onjam-peo : Raikitra ny miara manonja
14/02/2018 admintriatra Songandina 0
Saika ireo haino aman-jery rehetra manerana an’ i Madagasikara no niara nanjona omaly nandritra ny andro maneran-tany ho an’ ny onjam-peo, nihainga tetsy amin’ ny Radiom-pirenena ny fandraisana ny onja ary ireo mpanao gazety sy mpanentana amin’ ny haino aman-jery tsy miankina maro no nandray anjara tamin’ ny fanafanana ny miara manonja. Anisan ‘ny nandray anajara tamin’ io miara manonja io ho an’ ny eto Andrenivohitra izao ny One air, RDJ, Record, Radio Antsiva, Tana, RDB, Frequence +, IBC, Kolo , Sky One, Ma-fm, free fm, ACCEM, Soa Radio, Space Radio. Araka ny fampitam-baovao azo moa dia mhatratra hatrany amin’ ny zato ny isan ‘ireo onjam-peo miara manonja tami’n ity andro maneran-tany ho an’ ny onjam-peo ity. Ny “Radio sy ny fanatanjahatena”, no lohahevitra nobanjinina ary lohahevitra niarahana tamin’ny Unesco amin’ny alalan’ny fikambanana “taken in Mada” sy ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahatena izany. mitarika ny fanafanana ny miara manonja i Daniel Andriamaharo izay fantatry ny maro amin’ ny maha mpanoa gazety ara-panatanjahan-tena azy nandritra ny taona maro tao amin’ ny RNM, Manampy azy amin’ ny fanafanana sy ny fanentanana kosa ireo mpanentana avy amin’ ny tsy miankina.
Ny onjam-peo tokoa mantsy dia manana ny toerana tanteraka amin’ ny firenena tahaka an ‘i Madagasikara indrindra eo amin’ ny lafiny fifandraisana sy ny fanabeazana, noho izany ilana fahamatorana tanteraka sy fifehezana zavatra maro ny miasa amin’ izany. maro ohatra izao ny eto Madagasikara no manaraka ny zava misy rehetra amin’ ny halalan’ ny onjam-peo, satria izany fitaovan-tserasera izany no afaka raisina mora tsy ilana fitaovana maro. Na tsy manana jiro aza ny mponina tahaka ny any ambany vohitra lavitra any , dia ny onjam-peo no halalan’ izy ireo ny vaovao misy. Tsy hiresaka fotsiny isika izao afatsy ny fahatongavan’ ny rivo –doza , di any onjam-peo no hampitana ny vaovao zay misy rehetra sy ny fepetra tokony ho raisina. Noho izany dia manana ny toerany tanteraka ny onjam-peo eto amin’ tsika ankehitriny, ary izay no tena ilana fitandremana mba ho zavatra tsara tovozina amin’ izy ireny. Malalaka sy maro isafidianana ihany koa ny onjam-peo ankehitriny ary afaka misafidy izay tiany ireo mpihaino.